बाढीको वितण्डामा भक्तपुरको जर्जर दृश्य (हेर्नुहोस भिडियोसहित)::Digital News Paper
१पोर्न साइटमा छ्याप्छ्याप्ति भेटाउन सकिन्छ यी १० चर्चित नायिकाको भिडियो (भिडियो सहित)
२सयौंको संख्यामा हतियार सहित तैनाथ रहेको नेपाल प्रहरीलाई यसरी चक्मा दिए सिके राउतले
३उद्योगमन्त्री यादवले १ अर्ब घुस लिएर चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पदै यस्तो बहुमूल्य चिज
४प्रधानमन्त्री ओली किन जादै छन् अमेरिका ? खुल्यो यस्तो रहस्य
५नेकपामा भद्रगोल : यसरी खनिदै छन् ओलीकै बिरुद्धमा कार्यकर्ता !
६महाभारत युद्धमा हजारौं व्यक्ति मारिए पनि किन भेटिएन कसैको शव
७अल्प आयुमै मृत्यु भएकी श्रीदेवीबारे भेटिए यस्ता ९ तथ्य
८निर्मला हत्या प्रकरणः ‘शक्तिशाली’ छानबिन समिति गठन को को छन समितिमा पुरा पढ्नुहोस
९मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, मन्त्री भन्छन एजेन्डा बारे थहा छैन । पुरा पढ्नुहोस
१०अपराधी उम्काउन खोजे पछि निर्मला हत्याको छानविनबाट अलगिए उपसचिव केसी
११‘रामकहानी’ले २ दिनमा कति कमायो ? यस्तो छ अबस्था
१२पशुपतिनाथमा ‘कलि’को मूर्ती पुरै निस्किए पछि संसार ध्वस्त हुने अनुमान !
१३को हुन् अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका नवीनकुमार घिमिरे
१४अाेली र प्रचण्डबीच भयाे यस्ताे सहमति, गृहमन्त्री पदबाट थापालार्इ हटाउने तयारी
१५यस्तो छ मन्त्री हेरफेरको तयारी , ओली र प्रचण्ड बीच भयो गोप्य सहमति
बुधबार रातभर निरन्तर बर्षाभएपछि डुबानमा परेको भक्तपुरको दृश्य हो, यो । नितन्तरको बर्षापछि हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीका कारण भक्तपुरस्थित मध्यपुरथिमि नगरपालिका क्षेत्रका कमेरोटार, राधेराधे, निकोसेरा, दुवाकोट, सिर्जनानगर, सल्लाघारी, जगाती र लिवाली आसपासका सयौं घर डुबानमा परे ।
निजीघरसँगै विद्यालय, अस्पताल र मठमन्दिरहरू डुबानमा परेका छन् । हनुमान घाट, बाराही क्षेत्र आसपासका घरहरु, सिद्धिस्मृति प्रतिष्ठान, शान्ति निकेतन माविलगायतका बिभिन्न विद्यालय समेत डुबानमा छन् । हनुमन्ते खोलाको निकास सानो भएका कारण बाढी बस्ती पसेको हो ।
बाढीका कारण यसआसपासका सडक तथा बस्तीहरुमा चार फिटसम्म पानी जमेको थियो । सडकमा गुडिरहेका गाडी र पार्किङ गरिरराखेका थुप्रै सवारी साधन डुबानमा परे । अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध भयो ।
राति घरमा सुतिरहेका घरभित्रै थुनिए । घरबाट निस्केर भाग्न खोज्नेको बिचल्ली भयो । बाढी सटरभित्र पसेपछि पसल व्यवसाय गरिरहेकाको पनि बिचल्ली भयो ।
रातभरको बर्षाका कारण डुबानमा परेका भक्तपुरबासीले बिहानै उद्दारको आश गरेका थिए । तर, बिहीबार अबेरसम्म पनि उद्दारका काम अघि बढेन । बिहीबार ढिला नै भए पनि सरकारी तबरबाट उद्दारको काम भयो ।
पहिरोमा पुरिएर तीनजनाको मृत्यु
लगातारको बर्षापछि भक्तपुरकै चाँगुनारायण नगरपालिका–७ मझुवा बागेहिटीमा खसेको पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका तीनजनाको मृत्यु भएको छ ।
पहिरोमा पुरिएर स्थानीय ७० वर्षीय हिराबहादुर लामा, ६५ वर्षीया तानमाया लामा र नातिनी २ वर्षीया सम्पदा लामाको मृत्यु भएको हो ।
काठमाडौं र बनेपामा डुबान
भक्तपुरसँगै काठमाडौंका पनि विभिन्न स्थान पनि बाढीका कारण डुबानमा पर्यो । बागमती र विष्णुमती नदीमा आएका बाढीका कारण त्यसआसपासका कतिपय स्थान डुबानमा परेको हो । त्यस्तै ललितपुरका विभिन्न स्थानमा पनि पनि डुबान भएको छ । भक्तपुरसँग सीमाना जोडिएको काभ्रपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा बजार पनि डुबानमा परेको छ । काभ्रेकै नमोबुद्ध नगरपालिका–६ स्थित खाक्सेको रोशीखोलाको बाढीमा फसेका दुई जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरिएको छ ।
खानेपानीको काम गर्ने डोरज अप्रेटर नारायण श्रेष्ठ र उनका सहयोगीलाई हेलिकप्टरबाट उद्दार गरी काठमाडौं ल्याइएको हो । यससँगै देशमा विभिन्न भूगोलमा आएको बाढी तथा खसेको पहिरोका कारण नागरिकको दैनिकी प्रभावित भएको छ ।
अझै निरन्तर तीनदिन बर्षा हुने
मौसम पूर्वानुमान महाशखाले अझै तीनदिन काठमाडौं उपत्यकामा निरन्तर बर्षा हुने जनाएको छ । महाशाखाले विज्ञप्ति जारी गरेर तीन बर्षा हुने भन्दै र सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छ ।
महाशाखा अनुसार देशभर हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने छ । पूर्वका केही स्थानमा भने भारी वर्षा हुनसक्ने सम्भावना छ । बिहीबार देशभरि नै बदली रही मध्य र पश्चिमका अधिकांश स्थानमा र पूर्वका केही स्थानमा मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना छ भने साँझ र राति पनि देशभरि नै बदली रही अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
केही दिनदेखिको अविरल वर्षका कारण देशैभरको जनजिवन निकै प्रभावित बनेको छ । बाढीका कारण तराई क्षेत्रमा त वर्सेनि सताउने गरेको थियो नै यस पटक त उपत्यकामा नै बाढीले बिचल्ली बनायो । उपत्यकाको भक्तपुरमा नै यो अवस्था छ भने सोच्नुहोस् देशका अन्य ठाउँहरुमा के हालत होला । विगतका वर्षहरुमा गएको बाढीले तराईका मानिसहरुको दैनिकी कस्तो होला ? र अझै के के हुने होला ?
सरकारको सार्थक उपस्थितिको खाँचो यस्तै सास्ती भएको बेला हो । राज्य भएको अनुभूती यस्तै विपदमा हो तर राज्यले यो अवस्थामा खासै उपस्थिती देखाउन भने सकेको छैन । हामी प्रयासरत नै छौ भन्ने नियमित र बनिबनाऊ जवाफमा मस्त छन् राज्य सञ्चालकहरु ।
नेपालमा बाढीको समस्या कुनै नौलो समस्या होईन । बर्सेनी बाढी आउने र मानिसहरुको जनजीवन प्रभावीत भइरहेको छ । तर यसको समाधान कहिल्यै निकालिएन वा निकाल्ने प्रयास नै गरिएन । बाढीका कारण देशका बिभिन्न क्षेत्रका मानिसहरु घरवारबिहिन हुने गरेका छन ।
सरकारको ध्यान उनीहरुलाई राहत वितरणमा जान्छ तर त्यसको दिर्घकालिन समाधानमा भने कहिल्यै गएको पाईएन । जो सरकारमा गएपनि बाढीको समस्या हल गर्ने आश्वासन बाहेक खासै बाढी पीडितले अरु केही पनि पाएका छैनन् । र गएको साल बाढीले विस्थापित भएकाहरु अवस्था अझैपनि नाजुक नै छ । अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले पुरा देश नै आक्रान्त छ । यो विषयमा सांसदहरुले संसदमा पनि चर्कै आवाज उठाएका छन । उनीहरुले बाढीले देश नै अस्तव्यस्त भईराखेको बेला फोटो खिच्दै पानिजहाजको कुरा गरेर समाजिक सञ्जालमा मजाक बनाउनेलाई साईबर क्राईम अन्तर्गत कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन ।
जतिबेला राज्यको सार्थक उपस्थितिको खाँचो थियो त्यहिबेला उसको व्यबहारले थप बिजोग बनायो भन्ने आक्रोश बाढीपीडतहरुमा अहिले पनि देखिन्छ । राज्यको अभिभावकत्वको अभावले नागरिकको चिल्लीबिल्ली भएको ताजा दृश्य छ । समस्या बढ्दो छ । अहिले त समस्या बाढीको मात्र छ तर यसले थप समस्या निम्त्याउने खतरा बढेको छ । अहिलेको बाढी त सुरुवाती चरण मात्र हो । किनिकी, बर्षात्को खास मौसम आउन बाँकी नै छ । पोहोर तराईमा बाढीका कारण मृत शरिरलाई !गाड्ने ठाउँ समेत नपाएर नदिमा नै बगाईएको घटना ताजै छ । बाढीले त्यो सम्मको दर्दनाक अवस्थाको सिर्जना गरेपनि अहिलेसम्म त्यसलाई रोकथाम गर्ने खासै कार्यहरु भएको पाईएको छैन । बाढी आएपछि मात्र रोकथामाका उपाए खोज्ने प्रबित्तिका कारण बाढी सधैँको समस्या बनिरहेको छ । र यस वर्ष पनि बाढीले पहिले कै जस्तो विचल्ली बनाउने निश्चित छ । त्यसकारण सरकार भविस्यमा आउनसक्ने खतराको बारेमा चनाखो हुन जरुरी छ ।